Kooxda Khaatumo-xun, oo Jiritaankeeda uu Jahawareer Soo Foodsaaray, Jidadkii siyaasadeed oo Dhana ay ka Soo Xidhmeen. – Rasaasa News
Apr 25, 2010 Jwxo-shiil, khaatumo xun, koox
Talada adigaa ku nool ee iyadu kuguma noola, tawfiiqduna waa awooda dhaqaajisa guusha, tala xumo iyo taag darana waata Jwxo-shiil haysa maanta, maciibadii midig taagnaydna way miciya ridatay [Maadey].
“Nin aan kuu furaynin yuuna kuu rarin” waa odhaah Somaliyeed oo aan u baahnayn in aan laqmeeyo. Waxay ummada Somalida Ogadeeniya dhamaanteed ka dharagsan tahay in Mr. Jwxo-shiil, uu ka doortay ummada Somalida Ogadeeniya iyo halgankeedii lagu aaminayba xukuumada waalan ee Eritrea.
Eritrea, waxay u yeedhisay Jwxo-shiil wax walba oo xun oo dumin karay halganka ay ONLF waday. Amar militari oo lagu maamulo Cwxo iyo Hogaamada Jwxo, Naftood hurayaal badan ayaa lagu toogtay sharci aan la aqoon cid samaysay. Inta aan qoraal ku hayno Cwxo, oo lagu dilay amar Jwxo-shiil, waxay tiradoodu dhan tahay 84 Naftii hure iyo 11 masuul oo uu ugu dambeeyey uguna magacweynaa Dr. Dolal.
Dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee taageeri jiray halganka iyo Naftood hurayaasha Jwxo, way xamili waayeen dhibaatooyinka danaysiga ah iyo doqonimada Jwxo-shiil. Waxayna go,aansadeen in kolba hadii ay halgankii ummada Eritrea qaloocisay iyo in yar oo ay ku adeegato, waa laga gaabsaday in lagula dagaalamo halganka.
Maanta ciidankii xooga badnaa ee niyada wanaagsanaa ee ay lahayd Jwxo, siyaasadii ururka ee aduunku u boggay iyo taageerayaashii tirada badnaa meesha ay ku dambeeyeen waxaa la waydiin Jwxo-shiil.
Waxaa dhab ah in maanta xukuumada Eritrea ay la dhimanayso halganka Jwxo ee ay jahawareeriysay. Waxaana ku shidan xukuumada Eritrea holac aan hubo in ayna ka badbaadaynin xukuumada Afwerki. Waxaa dagaal ba,an ku wada Jabhado is biirsaday oo Eritrean ah oo ay Itobiya ku amaabushay, dhinaca dhaqaalahana waxaa saaran cuno qabatayn adag oo uu aduunku saaray. Dadka Eritreanka ah ee ka soo baxsanaya dalkooda ayaa xeryo qaxooti looga sameeyey gabalka Tigray, Itobiya, waxaana ilaa iyo hada xerada soo gaadhay 450 ruux.
Xukuumada Eritrea, waxay qarka u saaran tahay burbur, kooxda Jwxo-shiilna, waxaa haysta Jahawareer wayn, hadii ay Itobiya heshiis la gali lahaydna waxaa uga hormaray UWSLF.
Maadey oo Jalwada Kenya lagu Sheegay!